Ngathi-Xinxiang adumbe i-Elektroniki iTeknoloji Co., Ltd.
Xinxiang ukudumba Electronic Technology Co., Ltd.ibekwe kwisangqa sangaphandle eMzantsi seXinxiang Umgangatho ophezulu wobugcisa, ujikelezwe ziikholeji neeyunivesithi, uphando lwezenzululwazi kunye nomoya wezifundo. Okwangoku, inkampani inabasebenzi abangama-60, apho iitalente zenzululwazi nezobuchwepheshe zinika ngaphezulu kwe-35%. Ububanzi bayo beshishini bugubungela i-R & D kunye nokuthengiswa kwezixhobo zerobhothi ezikrelekrele, iimveliso zombane, izixhobo ezikrelekrele kunye neemitha, iisenzi, oomatshini bezolimo kunye nezinye izinto; uphuhliso lweemveliso zombane kunye nesoftware yokusebenza kunye neenkonzo zonxibelelwano lobuchwephesha; kunye nokusebenza kworhwebo lwangaphandle kunye nokuthengisa ngaphandle.
Isiseko se-R & D sigubungela iBeijing, iShanghai, iNanjing, iShenzhen kunye neGuangzhou, kunye nenethiwekhi yentengiso kwilizwe liphela. Inkampani ineqela lenkonzo yokuthengisa ekumgangatho ophezulu egubungela ilizwe liphela, ibonelela ngenkonzo ebanzi, ebukhali kunye nokukhawuleza kubathengi nangaliphi na ixesha. Kwiminyaka yakutshanje, inkampani yethu ilungiselela ukwakha iqela lophando lolondolozo lweqonga kunye neqela lophuhliso. Njengovulindlela kumzi mveliso wombane, exhomekeke kwingcinga yoyilo lokudibanisa ulawulo lwamandla kunye netekhnoloji yedijithali, sakhe isisombululo esipheleleyo solawulo lomgangatho wamandla. La makhonkco mathathu olawulo lohlalutyo lokufumanisa enza into evaliweyo, enika izisombululo zobungcali kunye neemveliso zenkqubo yamandla kunye namashishini atya umbane Siya kudala indawo ekhuselekileyo necocekileyo yombane ukukhusela amandla aluhlaza kwihlabathi.
Okwangoku, inkampani inezinto ezintlanu zeemveliso zeenkwenkwezi, kubandakanya isilawuli sembuyekezo yamandla asebenzayo, iswitshi edityanisiweyo kunye neswitshi ye-thyristor, i-capacitor ekrelekrele kunye nesixhobo somnatha, zonke ezo ziphuhliswe ngokuzimeleyo kwaye ziveliswe yinkampani yethu, Inkampani ikwanayo neworkshop yemveliso yanamhlanje, izixhobo zovavanyo oluphambili, izixhobo zovavanyo lokuhambelana kombane, i-SMT indibano ye-chip oluzenzekelayo kunye neqonga lophuhliso lwehardware, kunye nophuhliso lomngundo kunye neqela loyilo, elinokuqinisekisa ngokupheleleyo ulawulo oluzimeleyo lwemveliso ehambelana neemveliso ezintsha, kunye nokusebenza komgangatho kwaye ukhuseleko luyakwazi ukulawulwa ngokupheleleyo endaweni, ke inkampani yethu inendawo yayo Ukongeza ekubeni nelungelo lokuzimela kunye nokuthumela ngaphandle, iimveliso zeemveliso zinokunceda abathengi baphesheya baphumelele kwimveliso ye-OEM kunye ne-ODM. Kwi-2020, inkampani ikwanobume obucwangcisiweyo bemakethi yehlabathi. Ukongeza ekuthumeleni iimveliso zaseTshayina kwihlabathi, ikwaseke iholo yemiboniso yamanye amazwe. Ngokusekwe kukungenisa eTshayina kweemveliso zamanye amazwe ezimeleyo, inokuqonda ukukhuthazwa okanye ukusebenza kunye nokugcinwa kweemveliso zamanye amazwe kumajelo asekhaya Gqibezela umsebenzi wokurhweba nokuthumela ngaphandle.
Nxibelelana nathi, siya kuba nakho ukusebenza kunye ukwenza okuqaqambileyo.